TCN-NSC-2N 24h Saabuunta Sunta lagu nadiifiyo N95 Maaskarada wajiga mashiinka iibinta - Shiinaha TCN-NSC-2N 24h Saabuunta Nadiifinta Nakhshadda N95 Maaskaro Maaskaro Bixiyaha Mashiinka, Warshad â € “Mashiinka TCN ee Tagaya
Mashiinka Iibka Suuqa Micro
Talaajad caqliga leh
Cunto fudud & Cabbitaan Mashiinka Iibka
Mashiinka Iibka Cunnada Caafimaadka leh
Mashiinka Iibka Cunnada la qaboojiyay
Mashiinka Iibka Cunnada Kulul
Mashiinka Iibka ee PPE
Mashiinka Iibka Farmashiyaha
Mashiinka Iibka OEM / ODM
Soo Bandhigida Mashiinka
Bogga ugu weyn » Product » Mashiinka Iibka ee PPE
Daily supplies: Rice, flaur, milk powder, flavors, oils, salts, bottle water, etc.
Healthy Products: vitamins, masks, sanitizer, and OTC medicine
Washing Supplies: Shampoo, Shower Gel, Detergent, Javel water, etc.
Kartoon ama alwaax
H: 1835mm, W:700mm, D: 312 mm
10types(according to products size)
Interface caadiga ah
TCN mishiinada iibinta can support international MDB,DEX standard ,can meet all kinds of international standard .
Tignoolajiyada xumbo-samaynta guud, heerkul adag oo ka wanaagsan.
Ku dar baararka taageerada iyo dhamaadka guga si aad u keento smoothie.
Qabo nidaamka lacag bixinta soo dejinta sida ICT,ITL,MEI,NRI,NAYAX,INGENICO.
Gariiradda Spring, Gaadhi suunka, Afyare jillaab guga si weyn loogu isticmaalo alaabta kala duwan.
Nidaamka maamulka fog waxaa loo isticmaali karaa lacag la'aan waxaana lagu siin karaa maamulida heerka hawlgalka mishiinka, falcelinta jawaab celinta, socodka kormeerka, isbeddelka qiimaha fog.
1.Xoog sare & kabadh daboolan budada ah oo leh walxo si buuxda loo daboolay, unug wax iibin ah oo tayo leh.
2.Secure Albaabka oo leh xirmooyin duuban iyo iftiinka LED.
3.Daaqadda glazed ee saddexlaha ah.
4.Dual spirals on saxanadaha chip.
5. saxaarad kasta waxay hoos u dhigtaa 45 digrii si degdeg ah & si fudud loo rari karo.
6.Qaybta saxaarad la hagaajin karo iyo dhererka.
7.Sanad lacageed oo sugan/la xidhi karo.
8.With heerkulka heerkulka (4 ilaa 25 darajo Celsius hagaajin karo) Habka qaboojinta modular, fududahay in la ilaaliyo.
9.With dareeraha dareeraha / Vend Assure TM / dareemayaasha iibka / nidaamka bixinta dammaanadda. (waxay haysaa credit ilaa alaabta la keeno).
10.GPRS nidaamka la socodka fog, waxay bixisaa macluumaadka wakhtiga dhabta ah ee tooska ah.
11.Glass Heater-ku-xidhan muraayadda si looga hortago ciriiriga qoyaanka.
12.Excellent awoodda iyo saamiga cabbirka.
13.Qaabka dabacsan ee cunto fudud,cunto cusub, gasacadaha iyo dhalooyinka.
14.compressor tamar fiican,iwm.
15.Nidaamka qaboojinta qaboojiyaha R134a, wuxuu buuxin karaa shuruudaha ROHS.
16.Overall technology xumbo,40mm sameeyay, adag oo dahaarka heerkulka wanaagsan.
1.IC kaarka, kaarka aqoonsiga, xakamaynta codka, kaarka bangiga, credit card, QR code, note bank. qadaadiic, biilka, nidaamka lacag bixinta mobilada, kaarka NFC.
Cafes, Canteens, Hospitals,Hotels,Schools,Subway,Supermarket,Malls,Qolka shirarka,Bakhaarrada,Studioyada xirfada leh,qolka sugitaanka iwm.
Nidaamka Maareynta Fog ee TCN waa adeeg maarayn shabakad ku salaysan daruur
kuwaas oo laga heli karo meel kasta qalab kasta oo ku habboon oo ay ku jiraan PC, smart phones, tablets iyo wixii la mid ah si aad fog fog u maamusho oo aad ula socoto kooxahaaga mashiinada wax iibinta ee meelaha kala firdhisan.
Adeegga nidaamka maaraynta fog ee TCN, hawl-wadeennada wax iibinta waxay ku maamuli karaan mishiinkooda wax-ka-iibsiga si hufan oo faa'iido leh, iyagoo ka faa'iidaysanaya sifada dhamaystiran oo sahlan in la isticmaalo oo leh xogta wakhtiga dhabta ah, sida maamulka alaabada dhexe, maaraynta iibka iyo daba-galka , awoodda raad ururinta lacagta caddaanka ah, maareynta buuxinta saamiyada. Dhammaan kuwan waxay ka dhigan yihiin khasaare yar, kharash yar, waxtar badan, iyo faa'iido badan.
Adeegga OEM/ODM waa la bixin karaa.
1.In ka badan 100 R&D injineer.
2. In ka badan 70 shati-qaran.
3.15 sano oo loogu talagalay mashiinnada wax lagu iibiyo.
4.150,000 mitir murabac ah.
5.Large wax soo saarka in ka badan 150 unug.
6. Faa'iidada kharashka weyn.
7.International line shir toos ah.
8.Kooxda adeegga iibka ee xirfadleyda ah.
9.Compressor,bill iyo qadaadiic nidaamka lacag-bixinta oo hawl-sare ah oo la soo dejiyay.
10.Strong nidaamka maamulka TCN oo ma jirto lacag sanadle ah.
TCN-CFS-11G(V22) TCN Healthy Fresh Vegetables Salad Fruit Vending Machine With Touch Screen
TCN-D720-6G(5HP) Mishiinada cabitaanka fudud ee iskeed u adeegta
TCN-D720-10C(22SP) gym food and drink gym vending machine fitness vending machine
TCN-D720-10G(5HP) Cunto fudud iyo Cabbitaan Mishiinka Iibka
17 sano soo saaraha mashiinka wax iibinta
Bogga ugu weyn	Product	About	News	FAQ	Taageerada	R&D	Nala soo xiriir	Video
Xuquuqda daabacaadda © 2018TCN Xuquuqda daabacaadda waa la xafiday.